Wararka Xawaaladaha | RayHaber | raillynews
HomeGUUDWararka Lacagta 'Crypto Money'
15 / 02 / 2020 GUUD, Warqad Hordhac ah, TURKEY
Suuqa lacagta loo yaqaan 'crypto Money Market', oo maanta loo arko cinwaanka heerarka sare iyo dakhliga kasbashada aaminka ah, waa in si dhakhso leh loola socdaa maalgashiga ugu saxsan oo lagu kalsoonaan karo ee suuqa lacagta crypto.
Suuqa lacagta loo yaqaan 'crypto Money Market' waxaa loo tixgeliyaa inuu yahay aaladda ugu amniga badan adduunka si aysan saameyn ugu yeelan horumarka siyaasadeed iyo militariga ee xun. Waa suurtogal in la sameeyo faa'iidooyin aad u sarreeya wakhti aad u gaaban oo maalgashi caqli gal ah lagu sameeyo cryptocurrencies.
Si kastaba ha noqotee, barta ay tahay in maalgashadayaashu ay fiiro gaar ah u yeeshaan halkan waa xaqiiqda in iyada oo la adeegsanayo xulashada saxda ah iyo xirfadaha, guulaha aad u sarreeya ayaa laga heli karaa suuqa lacagta 'crypto', iyo dhanka kale, xaqiiqda in laga yaabo inay jiraan khasaare weyn oo leh go'aanno qaldan iyo kuwa hiwaayadda ah.
Kobcinta Lacagta Lacagta ee loo yaqaan 'Crypto Money' isla markaaba
Bartilmaameedka ugu aasaasiga ah ee dakhliga lagu kalsoonaan karo iyo sarreeya ee suuqa lacagta 'crypto' waxaa lagu gartaa iyadoo si dhaw loola socdo dhaqso isla markaana la saxo horumarka lacagta crypto. Dareenkan, boggu wuxuu kuusoo bandhigayaa horumarka, macluumaadka iyo wararka ka soo baxaya adduunka oo dhan hab dhaqso ah oo cusub. Qaabkaan, maalgashadayaasha lacagaha loo yaqaan 'crypto crypto' waxay fursad u leeyihiin inay ku darsadaan dakhliyada ku soo gala iyaga oo sameeya go'aamada maalgashi ee ugu saxsan uguna dhaqsaha badan.
Thanks to fursadaha ballaaran ee bogga, adigu waxaad tahay qofkii ugu horreeyay ee ka warqaba horumarro badan iyo warar si dhow ula xiriira suuqa lacagta crypto ee adduunka. Waa in aan la iloobin in xawaaraha iyo waqtiga ay yihiin furayaasha ugu muhiimsan ee maalgashiga suuqa cryptocurrency. Thanks to goobta, waxaad fursad u leedahay inaad si dhakhso leh maalgashi ugu soo sheegto maalgashiga lacagta crypto.
Maqaallada Suuqa Lacagta Asalka ah ee Asalka ah
Waxyaabaha ku jira bogga waxaa ka mid ah qodobbada asalka ah oo ay soo saareen khubaro ku xeel-dheer arimahooda iyo khabiiro khibrad sare u leh cryptocurrency. Sidan, waxaad fursad u leedahay inaad si dhow ula socoto horumarada ku saabsan suuqa lacagta crypto iyo saadaalinta mustaqbalka. Intaa waxaa sii dheer, qoraalada khubaro caan ah oo adduunka caan ku ah cryptocurrency ayaa laga heli karaa habka ugu casriyeysan iyo habka saxda ah isla waqtigaas. Sidan, maal-gashadeyaashu waxay fursad u leeyihiin inay arkaan oo ay qiimeeyaan dhammaan khataraha iyo faa'iidooyinka suurtagalka ah ka hor.
Wararka Lacagta Top Crypto
Wararka Crypto Waa mid ka mid ah arrimaha ugu muhiimsan maalgashadayaasha. Sababtoo ah horumar deg-deg ah ee cryptocurrencies badan, kordhinta dhakhsaha badan iyo hoos udhaca ayaa la kulmi karaa. Dareenkan, maxaa yeelay dad badan oo dalkeenna ah ayaan ka warqabin horumarada ka dhacaya adduunka si dhakhso leh, ha ahaadeen kuwo soo daahay maalgashi ama waxay la kulmi karaan khasaarooyin waaweyn maxaa yeelay waqtigooda ma xiri karaan waqtiga. Dareenkan, boggu wuxuu ka caawiyaa kuwa raacsan inay go'aannada ugu fiican isla mar ahaantaan la sameeyaan wareejinta macluumaadka degdegga ah ee macluumaadka adduunka iyo adeegga diridda wargelinta.
Tilmaamaha Saxaafadda Lacagta Xawaaladda Sare
Astaamaha lagama maarmaanka u ah soo bandhigida suuq suuq cryptocurrency tayo leh waa sida soo socota;
Si dhakhso leh u soo bandhigi karaan horumarka adduunka,
Nidaamka ogeysiinta degdegga ah,
Awood u leh inaad si xirfad leh ugu dhaqmayso wakhti kasta oo adeeggan ah oo ay la jirto kooxdeeda,
Kaliya maahan horumar la taaban karo laakiin sidoo kale horumarka xun ayaa u baahan in lagu helo qaab lagu soo bandhigi karo xawaare isku mid ah iyo xirfad xirfadeed.
Goobaha dareen this, Turkey waxay bixisaa ugu tayada sareeya iyo hab crypto-lacagta saxaafadda xirfadeed. Sidan, adeegsadayaashu uma baahna inay raacaan goobo shisheeye.
Wadada iyo buundooyinka lacagta daabacan
Meelaha Mashruuca Mashruuca Mashruuca waxaa lagu daabacay lacag
BBBUS waxay shaacisay in howlaha garoonka diyaaradaha ee Bursa-Sabiha Gökçen ay ka bilaaban doonaan 50% awooda rakaabka. Bayaanka ay soo saartay BURULAŞ, “Tigidhada waxaa laga iibin doonaa rakaab ka badan 65 sano jir xafiiska sanduuqa. Tigidhadaas waa la iibin doonaa [More ...]
Wadada Jidka weyn iyo Baadida Bridge
METRO iyo ANKARAY Bandhigga Nawaaxiga ee Xaafadda